कोरियामा कबड्डि-३ हाउसफूल, एकैदिन दुई शो प्रदर्शन – Kantipur Press
कोरियामा कबड्डि-३ हाउसफूल, एकैदिन दुई शो प्रदर्शन
October 7, 2019 adminLeaveaComment on कोरियामा कबड्डि-३ हाउसफूल, एकैदिन दुई शो प्रदर्शन
रियल फ्रेन्डस ग्रुपद्वारा प्रदर्शन गरिएको सुपरहिट चलचित्र कबड्डी ३ हाउसफुलका साथ दुई शो सम्पन्न भएको छ। कोरियामा नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा यसरी हाउसफुलका साथ एकै दिन दुई ओटा शो हुनुमा कबड्डि ३ ले रेकर्ड कायम गरेको छ।
अक्टोबर ६ आइतबारका दिन दोङ्देमुन स्थित छुङ्नो खुमिन विग्वानमा निर्धारित समय दिउँसो १ बजे भन्दा अगाडि नै दर्शकहरुको बाक्लो भीड रहेको थियो। भीडलाई नियन्त्रण गर्न आयोजकलाई निकै गाह्रो परेको थियो। हलमा दर्शकहरु खचाखच भरिएपछी धेरै टाढाबाट आएका दर्शकहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै दोश्रो शो देखाउनु परेको ग्रुपका एडमिन पवित्रा थेवेले जानकारी गराइन्।
चलचित्र प्रदर्शनबाट उठेको रकम अनाथ बालबालिका सहयोगार्थ रहने छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा सक्रिय यो ग्रुपले विभिन्न सामाजिक कार्यहरु पनि गर्दै आइरहेको छ।
लोकप्रिय कलाकार दयाहाङको मूख्य भूमिका रहेको यस चलचित्रका अगाडिका २ सिक्वेलपनी सुपरहिट भएका थिए। कोरियामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनिहरूलाई उपस्थिति भइ भव्यरूपमा शो सफल बनाइदिएकोमा आयोजकले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
कोरियामा बाख्री भन्दा बोका सस्तो !
मौसमी कामदारको रुपमा कोरिया आएका १७ नेपाली भागे
उत्तर कोरियाको चेतावनी ! दक्षिणलाई हटाएर सिधै अमेरिकासँग वार्ता
प्रधानमन्त्री के.पी ओली लाई कोरियाबाट एक यूवाको खुल्लापत्र !
कोरियामा तिब्र गतिको आँधिबेहरी (टाईफुन) को बितन्डा,सतर्क रहन सुझाव !